Amazwi kaNkulunkulu Angiphaphamisile | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
UMiao Xiao edolobheni laseJinan, esiFundazweni saseShandong
Ngaphambilini, ngangihlezi ngicabanga ukuthi uma uNkulunkulu wayethi “unopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe” wayeqondise kulabo abamukela umsebenzi kaNkulunkulu ezinsukwini zokugcina kodwa bese behlehla. Ngakho-ke, noma nini lapho ngibona abafowethu nodadewethu bephuma kule ndlela ngenxa yanoma yisiphi isizathu, inhliziyo yami beyigcwala ukunengeka ngabo: Nanso enye incelebane nomkhohlisi ozothola isijeziso sikaNkulunkulu. Ngesikhathi esifanayo, ngazibona sengathi ngiziphathe ngendlela efanele ngokwamukela isahlulelo sikaNkulunkulu futhi owayengaqhelelene nokuthola insindiso kaNkulunkulu.
Ngelinye ilanga, ngenkathi ngizifundela imibhalo yami yansukuzonke yezomoya, ngabona okulandelayo emazwini kaNkulunkulu “UKristu Wenza Umsebenzi Wokwahlulela Ngeqiniso”: “Ngoba ingqikithi yalo msebenzi empeleni ingumsebenzi wokudalula iqiniso, indlela, kanye nempilo kaNkulunkulu kubo bonke abakholwa Kuye. Lo msebenzi ngumsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu. Uma ungawabuki la maqiniso ngokubaluleka kwawo futhi uhlala ucabanga ukuwabalekela noma ukuthola indlela entsha yokuwabalekela, ngithi uyisoni esikhulu. Uma ukholwa kuNkulunkulu, ube ungalifuni iqiniso noma intando kaNkulunkulu, noma ungayithandi indlela ekusondeza kuNkulunkulu, ngakho ngithi kuwe ungumuntu ozama ukubalekela ukwahlulela. Ungunopopi futhi uyimbuka elibalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe. UNkulunkulu ngeke axolele muntu ohlubukayo ophunyukayo phansi kwamehlo Akhe. Abantu abanjalo bayothola isijeziso esiqine kakhulu. Labo abeza phambi kukaNkulunkulu ukuze behlulelwe futhi esebengcwelisiwe bayophila phakade embusweni kaNkulunkulu” (Izwi Livela Lisenyameni). Emva kokuninga ngala magama, ekugcineni ngabona ukuthi: Kubonakala sengathi izincelebane nabakhohlisi ababalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe asibhekisile kulabo abahlehlayo kule ndlela. Okubaluleke kakhulu, kubhekise kulabo abalandela uNkulunkulu kodwa abawazisi la maqiniso, abantu abahlezi behlola la maqiniso, bebheka indlela entsha yokuphuma ngaphandle kwala maqiniso, futhi bengazimisele ukuzinikela ekusoleni nasekwahluleleni kukaNkulunkulu futhi bafuna ukuhlanjululwa nguNkulunkulu. Ngaphansi kokukhanyiselwa nokuhola nguNkulunkulu, ngaqala ukubuka indlela yami yokuziphatha: UNkulunkulu manje uzwakalisa amazwi Akhe okwahlulela umuntu, kanye nokuhlanza izinto ezivela kumuntu ezingahambisani Naye ngokuhlupheka nokucwengwa. Kodwa ebusweni bokusolwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu, ukuhlupheka nokucwengwa, ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngizama ukubaleka, ngethemba ukuthi uNkulunkulu uzoshesha asuse lezi zimo. Ingabe lokhu akukona ukubalekela iqiniso kanye nokufuna indlela yokuphunyuka ngaphandle kweqiniso? Ngenkathi abantu noma izinto ezilethwe nguNkulunkulu zingahambelani nemibono yami noma nezimo zami ezimbi, ngisho noma ukuxhumana nabafowethu nodadewethu kungase kusombulule izinkinga zami futhi kususe ukungamqondi kahle kwami uNkulunkulu, ngisenqaba futhi angivumi ukulalela. Ingabe lokhu akukona, njengoba uNkulunkulu esho, ukungafuni iqiniso kanye nokungathandi indlela engisondezayo kuNkulunkulu? Uma kubhekanwa nami futhi ngithenwa ngenxa yendlela engingenzi kahle ngayo umsebenzi wami, ngaso sonke isikhathi ngifuna izaba zokuba ngichaze isimo sami. Ingabe lokhu akuwona umongo wokwenqaba ukwamukela iqiniso? Esikhathini esiningi ngiye ngizame ukuzenzela izaba empilweni yangokoqobo. Ngisho noma ngazi ukuthi kuyiqiniso, ngiyenqaba ukungalaleli inyama ngiliphile. Ingabe lokhu akukona ukwamukela ukwahlulelwa kodwa ngingafuni ukuhlanjululwa? … Manje njengoba ngicabanga ngako, ngiyakuqonda ngokucace kakhulu: Abantu uNkulunkulu athi babalekela isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe akubhekisile nje kulabo abashiya ibandla. Okubaluleke kakhulu, kubhekise ezinhliziyweni zethu ezinqabayo ukwamukela iqiniso kanye nokungazimiseli ukunikela ekwahlulelweni kukaNkulunkulu. Kumanje kuphela lapho ngaqala ukuzizwa nginokwesaba nokuqhaqhazela. Yize noma ngingalishiyanga ibandla, ngaso sonke isikhathi lapho ngihlangana nenkinga ngangenqaba ukwamukela iqiniso futhi ngigwema ukwahlulela kukaNkulunkulu. Ingabe angiyona ngqo incelebana nomkhohlisi obalekela isihlalo sikaNkulunkulu sokwahlulela? Kodwa ngikholwe ukuthi akubona kuphela labo abashiya ibandla abayizincelebana nabakhohlisi ababalekela isihlalo sikaNkulunkulu, ngenkathi ngangisondelene kakhulu nokuthola insindiso kaNkulunkulu. Ngiyabona ukuthi ukuqonda kwami amazwi kaNkulunkulu kwakucheme kakhulu futhi kungajulile, nokuthi ulwazi lwami lomsebenzi kaNkulunkulu lwaluluncane kakhulu. Manje, yilabo abamukela ngokuyiqiniso ukusolwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu futhi izimo zabo ezifeze ushintsho abazothola ngokweqiniso insindiso kaNkulunkulu. Kunalokho, ngangiphila kowami nje umhlaba, ngingalambele iqiniso, ngingathathi isibopho ngempilo yami, futhi ngingakwazi nokubona ingozi futhi ngingajahe ndawo nhlobo. Uma ngiqhubeka kanje, ngeke yini ngibe yilowo ozothola ukujeziswa nguNkulunkulu?
Ngiyabonga ngokukhanyisela kwamazwi kaNkulunkulu, ngivukile emibonweni nasemicabangweni yami, ngabona ukuthi angiyena umuntu ozimisele ukwamukela ukusolwa nokwahlulelwa nguNkulunkulu. Futhi kuphinde kwangenza ngabona ukuthi ngisengcupheni yengozi. Kusukela manje kuya phambili, ngizonikeza inhliziyo yami ngokuphelele kuNkulunkulu, ngizinikele ekusolweni Kwakhe nasekwahlulelweni, futhi ngenze konke okusemandleni ukufuna iqiniso nokuguqulwa kwesimo semvelo yami, ukuze ngisheshe ngihlanjululwe futhi ngipheleliswe nguNkulunkulu.
Okwedlule：Impi Yempilo Nokufa
Okulandelayo：Ukuqonda Okuncane Ngokusindiswa
Isintu esinonya nesihluku! Ubuqili nokusongelana, ukududulana, ukugijimela udumo nokuceba, ukubulalana—kuzophela nini?